Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • India Travel News • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia
Ny Fikambanan'ny mpikarakara ny fizahan-tany Indiana dia namporisika ireo mpikambana - Ataovy vaksiny
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » Ny Fikambanan'ny mpikarakara ny fizahan-tany Indiana dia namporisika ny mpikambana: vaksiny! » Page 2
The IATO Nanampy ny filoha fa fantatr'izy ireo ankehitriny fa tsy ampy ny vaksininy, saingy tsy maintsy manandrana isan'andro ao amin'ny tranonkala e-isan'andro ny olona iray hamandrihana slot ho an'ny vaksiny satria ny slot dia omena iray andro monja alohan'ny datin'ny vaksiny. Na izany aza, ny fanjakana samihafa dia samy manana ny politikany, koa namporisihiny ny mpikambana mba tsy hilavo lefona ary hiezaka hatrany ny hanao vaksiny voalahatra.
Naneho ny hafaliany Andriamatoa Mehra ihany koa fa raha ny vaovao dia hainganana ny famokarana vaksinin'ny COVID-19 ao anatin'ny volana ho avy satria samy manangana ny fahafaha-mamokatra isam-bolana ny Pune's Serum Institute of India sy ny Hyderabad's Bharat Biotech. Ho fanampin'izay, Sputnik V dia ho hita tsy ho ela koa. Izany rehetra izany dia hanafaingana ny programa fanaovana vaksiny amin'ny volana ho avy ho an'i India.